September 27, 2021 - Achawlaymyar
ကံဇာတာေတြ ေကာင္းခ်င္ရင္ ( ဖတ္ၾကည့္ေနာ္ )
September 27, 2021 by Achawlaymyar
ကံဇာတာတွေ ကောင်းချင်ရင်ဖတ်ကြည့်နော် ဘဝမှာကံဇာတာတွေ ကောင်းချင်ရင်၁။မနက် မျက်နှာသစ်တဲ့အခါသရဏဂုံကို ရွတ်ဆိုပါ။ ( မျက်နှာအကြည်ဓာတ်လေး ရစေပါတယ် ) ၂။သွားတိုက်တဲ့အခါ ဂုဏ်တော်ပွါးများပါ။ ( ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်းတဲ့အကြံအစည်အပြောအဆို မှန်သမျှ အောင်မြင်စေပါတယ် ) ၃။သတိရရင် ရသလို မေတ္တသုတ် ရွတ်ပါ။ ( မေတ္တာပေးတဲ့သူနား မေတ္တာပြန်ပေးသူတွေနဲ့လုံခြုံ နွေးထွေးစေပါတယ် ) ၄။တစ်နေ့( ၂ )ကြိမ်အနည်းဆုံး သောက်တော်ရေ ကပ်လှူပါ။ ( “၇”ရက် သားသမီးများ အေးချမ်းသလိုကိုယ့်ဘဝလဲ အေးချမ်းပါတယ် ) ၅။တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်မဟာသမယသုတ် ရွတ်ဖြစ်အောင် ရွတ်ပါ။ ( နတ်တို့ ချစ်ခင် စောင့်ရှောက်ပါတယ် ) ၆။တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ် ပူဇော်ပါ။ ( အကျိုးကျေးဇူး ဧကန်ထူးပါတယ် ) ၇။တဈနေ့ … Read more
ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးမှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ… ကြည့်စမ်းပါအုံးဗျာ ဖေ့သားကြီးတို့လိမ္မာချက်က လူတောင်လိုက်စရာမလိုဘူးနော်။ ညာဏ်ရည်တုနည်းပညာတွေထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော် ဒါကသက်ရှိအမှန်အကန် သူတို့ဘာသာထွန်နေကြတာ ဒီလိုနွားတစ်ရှဉ်းလောက် မလိုချင်ကြဘူးလား သူတို့ကထွန် ကိုယ်က ဖုန်းလေးနဲ့ ဖေ့ဘုတ်ပွတ်နေရုံဘဲ။ ထွန်သွားကြတာများ ထွန်ကြောင်းကိုဖြောင့်လို့…လူပါတာကမှ လွဲချင်လွဲအုံးမယ်၊ သူတို့ကတော့မလွဲဘူး တိရိစ္ဆာန်ဆိုပေမယ့် သူတို့အသိညာဏ်က ကိုယ့်တာဝန်ကိုသိတယ် မခိုမကပ်ကျေပွန်အောင်ထမ်း တယ်၊ တစ်ချို့လူတွေထက်တောင်သာသေးတယ်နော်။နွားတွေဆိုတာ မြန်မာပြည်တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်တော့ ရဲဘော်ရဲဘက်၊ ကျေးဇူးရှင်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ နွားကောင်းကောင်းလေးများရထားရင် ပျော်လို့မ ဆုံးတစ်ပြုံးပြုံး၊ သူ့နွားကိုယ့်နွားအပြိုင် ကြွားရသေးတယ်။#ထန်းညက်ခဲနွားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှေးဆိုရိုးမှတ်သားစရာလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… (နွားအကြောင်း သိကောင်းစရာ) ၁။ နွားနီ ကွမ်းသွေး ရိုက်နိင်မှပြေး ၂။ နွားပြာနီ တုတ်မွှေး ရိုက်နိင်မှပြေး ၃။ နွားပြာ ချိုတုတ် ထမ်းပိုးနှုတ် ၄။နွားပြာနီ ရှဥ့်မွှေး ရိုက်နိင်မှပြေး ၅။ ဇော်နီကွမ်းသွေး သေအောင်ပြေး … Read more
အိမ်ကမိန်းမအပေါ်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြချင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားရဲ့ အဆုံးသတ်…
ယောကျင်္ားလေးတွေအချို့က အိမ်ကမိန်းမအပေါ် အောက်မကျို့ရကြောင်း နဲ့ အမြဲအသာစီးရှိနေလေ့ရှိကြောင်း သူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာ ပြောပြချင်ကြသူတွေပါ ။ သို့ပေမဲ့လည်း တစ်ခါတစ်လေ ထင်မြင်ထားတာနဲ့လွဲနေကြောင်း အချို့က သက်သေပြနေလေ့ရှိပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြမဲ့စုံတွဲကလည်း ဇနီးအပေါ်အနိုင်ရကြောင်း သက်သေပြချင်တဲ့အမျိုးသားက ဇနီးရဲ့ပညာပေးတာကိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင် ၊ နောက်ဆုံးအိမ်ပေါ်ကနေဆင်ပြီး လမ်းမကြီးဘေးမှာ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ထိရောက်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကို social media ပေါ်မှာ ဝေမျှပေးသွားခဲ့ပါတယ် ။ Credit Zawgyi ေယာက်ၤားေလးေတြအခ်ိဳ႕က အိမ္ကမိန္းမအေပၚ ေအာက္မက်ိဳ႕ရေၾကာင္း နဲ႔ အၿမဲအသာစီးရွိေနေလ့ရွိေၾကာင္း သူငယ္ခ်င္းေတြေရွ႕မွာ ေျပာျပခ်င္ၾကသူေတြပါ ။ သို႔ေပမဲ့လည္း တစ္ခါတစ္ေလ ထင္ျမင္ထားတာနဲ႔လြဲေနေၾကာင္း အခ်ိဳ႕က သက္ေသျပေနေလ့ရွိပါတယ္ ။ ဒီတစ္ေခါက္ေဖာ္ျပမဲ့စုံတြဲကလည္း ဇနီးအေပၚအႏိုင္ရေၾကာင္း သက္ေသျပခ်င္တဲ့အမ်ိဳးသားက ဇနီးရဲ႕ပညာေပးတာကိုခံခဲ့ရတဲ့အျပင္ ၊ ေနာက္ဆုံးအိမ္ေပၚကေနဆင္ၿပီး လမ္းမႀကီးေဘးမွာ အဆုံးသတ္ခဲ့ရတဲ့အျဖစ္ထိေရာက္ခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ေလးကို social media … Read more
ချစ်တာတော့ ချစ်ပါ ညီမလေးပြန်ပြင်လို့မရတဲ့ အခွင့်အရေးတော့ မပေးမိပါစေနဲ
သတိထား ညီမလေးအရေခွံဘယ်လောက်လဲလဲမြွေဆိုတာ တီဖြစ်မသွားဘူးပြောင်းလဲတဲ့လောကကြီးမှာ လိုက်ဖက်ညီအောင်အရောင်ပြောင်းနေရင် ပုတ်သင်ညိုသာသာဖြစ်တော့မပေါ့ပတ္တမြားမှန်တယ်ဆိုတိုင်း နွံထဲဝင်မှိုင်ပြစရာလားကွယ်ခြေဆေးမခံရအောင် အိုင်ထဲထိုင်မယ့်အစားရေသန့်လို့တံဆိပ်ကပ်နိုင်ရင် တန်ဘိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ဝေးတိုင်းလဲ….အားမငယ်စိတ်မပျက်နဲ့အမောပြေရေတစ်ခွက် အိမ်ပြေးလေးအတွက်တဲ့အမေ နေ့တိုင်းခပ်ထားတယ်။ မမှားဘူး ညီမလေးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတာမိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်အရိုးဆို ကြည့်ရှောင်ရမယ်လေကိုယ်က ခဏတာဝါးမယ့်သွားမဟုတ်ဘူးစကားခလုတ်တွေ ဘယ်လောက်တိုက်တိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိခိုက်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်တကယ်တော့ ဟင်းကြေးများတယ်ဆိုတာအစားကောင်းစားရတဲ့သူတွေကို သမုတ်တဲ့ အမည်သက်သက်ပါ။ ချစ်တာတော့ ချစ်ပါ ညီမလေးပြန်ပြင်လို့မရတဲ့ အခွင့်အရေးတော့ မပေးမိပါစေနဲ့ဘဝနဲ့ရင်းတဲ့လက်ရေးအတွက် ဖျက်ဆေးမရှိဘူးဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုအတွက် စိတ်ရိုင်းမမွေးမိပါစေနဲ့မှတ်ပုံတင်ထဲပြန်ကြည့်ပါ ညီမလေးကိုးကွယ်စရာမှာ အချစ် မဟုတ်ဘူးလေ။ ညီမလေးရေ…. ချစ်ဦးသူနဲ့ ရတယ်ဆိုတာတို့အိမ်ဘေးက နှင်းဆီလောက်သာရှိပြီးအချစ်ဦးနဲ့ လွဲဖူးသူဟာအိမ်ရှေ.က ခရပွင့်တွေကြွေသလောက်ရှိတယ်အသဲကွဲတယ်ဆိုပြီး ဘီယာသောက်လောကကြီးကို မှောက်ပစ်တတ်တာပညာမဲ့သူတွေ သက်သက်ပေးတဲ့ဆင်ခြေတစ်ခုပါမုန်တိုင်းထဲမှာလဲ အောက်ဆီဂျင်ပါပါတယ်လေနည်းတယ်အထင်နဲ့ ရွက်ကိုတော့ပြင်းပြင်းမလွင့်လိုက်ပါနဲ့တည်ငြိမ်ခြင်းဆိုတာ မိန်းကလေးအိန္ဒြေလေတန်ဘိုးသိတဲ့သူက တန်ဘိုးထားလာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ကသာ ရတနာတစ်ပါးဖြစ်ပါစေ ညီမလေးရေ….. ညီမလေးရေ…. ယောကျ်ားဆိုတာဧကရာဇ်ဘုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နန်းကျဘုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြှောက်စားတာ ခံချင်ကြတယ်ကျားကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်ဖို့ဆိုတာေ ကြာင်တစ်ကောင်လို ညင်သာတတ်မှဖြစ်မယ်ကမ္ဘာကျော်တဲ့ စစ်သူရဲတစ်ယောက်တောင်အပြောချိုတဲ့ အအိုချောကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝက်ကို တက်သိမ်းဖူးတယ်လေလေယူရာတိမ်းတတ်တဲ့ … Read more
ကိုယ်ရဲ့HD ထွက် တယ် ဆို လို့ (၁၀)ခါလောက် ပြန်ကြည့် ဖြစ်တယ်လို့ သံသာမိုးသိမ့်ပြောပြီ
သူမကို နာမည်ဖျက်တဲ့ သတင်းတွေကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူ ကလည်း စိတ်ဆိုးခဲ့ပြီး သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း မဟုတ်တာကို ဘာလို့ခေါင်း စဉ် တပ် ပြောနေကြတာလဲ ဆိုပြီး စိတ်တိုခဲ့ပေမယ့် အနုပညာရှ င်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် သည်းခံ တဲ့အကြောင်းေ လးတွေကို ပြောပြ ထားတာပါအဲ့လောက်လေးနဲ့ စိတ်တွေ ထိခိုက်နေရင်လည်း အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဘယ်လိုလုပ်လို့ ရတော့ မှာလဲ တိုက် ခိုက်တာ ကိုတော့ ခံရမှာပဲ Fb မှာ စာတင် လိုက်တာကလည်း ကိုယ်မဟုတ်တဲ့အကြောင်း ပြန်ရှင်းပြတဲ့ သဘောပါပဲ..’ သံသာမိုးသိမ့်ရဲ့ ဖြေရှင်းချက်လေးကိုလည်း တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီး တို့ရဲ့ အချစ်တွေကို အခိုင်အမာသိမ်းပိုက် ထားကြ တဲ့ ပြည်သူ့ အသည်းကျော်အနုပညာရှင် တွေထဲ မှာ MRTV-4 မင်းသမီးချောလေးတွေ ထဲက … Read more
ထင်မထားတဲ့ အလွယ်တကူ ရနိုင်တဲ့ ပင်စိမ်းရွက်နဲ့ ပျောက်စေမယ့် ရောဂါအမျိုး ( ၄၀ )
ထင်မထားတဲ့ အလွယ်တကူ ရနိုင်တဲ့ ပင်စိမ်းရွက်နဲ့ ပျောက်စေမယ့် ရောဂါအမျိုး ( ၄၀ ) ပင် စိမ်းပင်သည် မြန်မာနိုင် ငံနှံ့အပြားတွင် ပေါက်ရောက်ပြီး အပူပိုင်းဒေသတွင် ပိုမို၍ ပေါက်တတ်ကြသည်။ ပင်စိမ်းပင်သည် သဘာဝအလျောက် ပေါက် ရောက်သော အပင်ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုး၍လည်းရသည်။ မျိုးစေ့မှတဆင့်အပင်စိုက်ရန် လွယ်ကူသောအပင် ဖြစ်သည်။ မြေသြဇာ အထူးမလိုအပ်လှ ပေ။ တနှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ် အရွက်ကို ရယူနိုင်၏။ နောက်ကျလျှင် အလိုလို ကြွေကျသွားသဖြင့် ဂရုပြုဖို့လိုအပ်လှပေသည်။ အရွက်နှင့် အစေ့ကို ဆေးအဖြစ် အများဆုံး အသုံးပြုကြသည်။ ပင်စိမ်းပင်သည် အပင်ငယ်မျိုးဖြစ်ပြီး အမြင့်နှစ်ပေမှ သုံးပေခန့်အထိ ရှိ၏။ အရွက်မှာ သေးပြီးစိမ်းလျက် နူးညံ့၏။ ရွက်နားမှာ လွှသွားပုံရှိသည်။ အပွင့်ဖြူကလေးများပွင့်တတ်ကာ ရနံ့မှာ … Read more
အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာ ၂၂၃၅ ကျပ်၊ အခေါက်ရွှေတစ်ကျပ်သား သိန်း ၂၀ နီးပါးရောက်ရှိ
အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာ ၂၂၃၅ ကျပ်၊ အခေါက်ရွှေတစ်ကျပ်သား သိန်း ၂၀ နီးပါးရောက်ရှိ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်တွင် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် အမေရိကန်တစ်ဒေါ် လာလျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၂၂၃၅ ကျပ်၊ အခေါက်ရွှေတစ်ကျပ်သား ၁၉၈၄၀၀၀ ကျပ်( သိန်း ၂၀ နီးပါး) ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဈေးကွက်အတွင်းမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။… “ဒေါ်လာကတော့ အဝယ်ပဲရှိတယ်။ အဝယ်များတယ်။ အရောင်းလည်း မျှပေမယ့် ရောင်းသူတော့ နည်းပါတယ်။ ခုက တစ်ဒေါ်လာကို ၂၂၃၅ ကျပ်နဲ့ ၂၂၅၀( ငွေလဲဒိုင်များက ဒေါ်လာ လာဝယ်သူများထံသို့ ရောင်း ဈေး) အတွင်းမှာ ရောင်းပေးတယ်။ရှေ့ဆက်တက်မယ်လို့ပဲ မြင်ရပါတယ်။ ဒေါ်လာ တန်ဖိုး ပြန်ကျဖို့ကတော့ ခက်မယ်ထင်ပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်ငွေလဲဒိုင်တစ်ဦးက ပြောသည်။… … Read more
နှလုံးသားတစ်ခုလုံးပုံအပ်ပြီး သင့်ကိုပဲတကယ်ချစ်နေတဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ရဲ့လက္ခဏာ(၅)မျိုး
နှလုံးသားတစ်ခုလုံးပုံအပ်ပြီး သင့်ကိုပဲတကယ်ချစ်နေတဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ရဲ့လက္ခဏာ(၅)မျိုး ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခန့်မှန်းရအခက်ဆုံးကတော့ သူကိုယ့်ကို နှလုံးအပြည့်နဲ့ တကယ်ချစ်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ခင်မင်ရုံ သက်သက် ပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် အပျော်တွဲတာလား ဆိုတာကိုပါပဲ။ အခုဖော်ပြပေးမှာ ကတော့ သင့်အပေါ်ကို နှလုံးသား တစ်ခုလုံးပုံအပ်ပြီး သင့်ကိုပဲ အရူးအမူးချစ်နေတဲ့ ယောကျ်ား တစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာတွေကိုပါ။ ဒီအချက်လေးတွေဟာ သင့်ချစ်သူ ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်သိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ (၁) ဖုန်းနဲ့စကားပြောတယ် သင့်ကို အီစီကလီ ဒါမှမဟုတ် အပျော်လောက်ပဲ သဘော ထားတဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ဟာ text တွေ၊ chatting တွေလောက်နဲ့ပဲ သင့်ကို စကားပြောမှာပါ …။ ဒါပေမယ့်လည်း သင့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ကတော့ သူအားတဲ့ … Read more
အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး တင်းတိပ်ပျောက်ဆေး တင်းတိပ်ပျောက်ဆေး” တင်းတိပ်ဆိုတာ မျက်နှာ အသားကို နေပူလောင်တာ၊မီးပူမိတာက စတာပါ “..” မီးအပူနဲ့ ချက်ရ ၊ ပြုတ်ရတာတွေလည်းပါတာပေါ့”သုံးရမှာက အိမ်မှာ ငွေလည်းမကုန် ၊ လွယ်လွယ်နဲ့ ရတဲ့မီးဖိုချောင်ထဲက မြန်မာ့ တိုင်းရင်းဆေး ပစ္စည်း မကျည်းသီးမှည့် ပါဘဲ ။ကျွန်တော် အဲဒီနည်းကို အမကြီးတွေ ၊ညီမတွေကို ပေးပြီး စမ်းသပ်ခိုင်းတာ ဆယ်ရက် – ဆယ်ငါးရက်အတွင်း သိသိသာသာ ပျောက်သွားတာတွေကိုမျက်မြင် တွေ့ရလို့ မျှဝေပေးတာပါ ။ ဆေးနည်း ၁ ။မကျည်းသီးမှည့် နည်းနည်းကို ခွက်တစ်ခုထဲမှာရေ နဲနဲထည့်ပြီးပုံထဲက အတိုင်း မပျစ် မကျဲလေး ဖျော်ထားပါ ။ ၂ ။ အဲဒီ မကျည်းမှည့် ဖျော်ရည်ကို မနက်အိပ်ရာထ … Read more
ဘယ်လောက်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ် ဒီ ၆ မျိုးကို လုံးဝ မပြောသင့်ဘူး
ကျွန်မတို့တွေဟာ ကိုယ်နဲ့ခင်နေတဲ့ သူတွေအပေါ် အလွန်အမင်း ယုံကြည်တတ် ကြတဲ့ စိတ်လေးရှိ ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတော့ သူကတော့ ငါ့ကိုမကောင်းကြံမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူကတော့ ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ ယုံကြည်စိတ်လေးပေါ့။ သဒ္ဒါလွန်တော့ ကျွန်ဖြစ်ဆိုသလို ယုံကြည်မှု လွန်ကဲတဲ့ အခါ ဒုက္ခရောက် ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အယုံလွန်ပြီး ဒုက္ခမရောက်ရအောင် ဒီအကြောင်းတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှဖွင့် မပြောပါနဲ့။ အတိတ်ကအမှားလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း….. အတိတ်က အမှားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လျှောက်မပြောပြ ပါနဲ့။ ကျွန်မတို့ကယုံကြည်လို့ပြောတာဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်လူက ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုသဘောထားလဲ မသိနိုင်ဘူးလေ။ အခန့်မသင့်ရင် ဒါကို အသုံးချပြီး ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်တာ၊ နှိမ့်ချတာမျိုးလုပ်လာနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့်မို့ အတိတ်ကကိုယ်အမှားလုပ်မိခဲ့ရင်လည်း အဲ့ဒီအမှားနဲ့ပတ်သက်လို့ လူတွေဆီမှာ ဝန်ခံနေဖို့မလိုပါဘူး။ အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားခဲ့ပါ…. ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကျွန်မတို့မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမတူညီနိုင်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက် မုဒိတာ … Read more